रामवीर मानन्धर भन्छन्, सहमतिमै नेतृत्व चयनका लागि भरपुर प्रयास हुन्छ «
रामवीर मानन्धर भन्छन्, सहमतिमै नेतृत्व चयनका लागि भरपुर प्रयास हुन्छ
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूले पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूले जनजाति क्लष्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘जनजाति क्लष्टरबाट २२ जनाले उम्मेदवारी दिने हो, त्यसमा ७ जना महिला हुनुहुन्छ र १५ जना पुरुष हुन्छन् । मैले त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यसपटक पार्टीमा सर्वसम्मत् रुपमा नेतृत्व चयन हुने पनि बताए । उनले भने, ‘नेतृत्व यसपटक सर्वसम्म्त रुपमा चयन गर्ने कुरा छ । तर, प्रतिस्पर्धामा जानु पनि ठूलो कुरा होइन ।
भोलि विहान उद्घाटन हुने महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘चितवनमा ३५ सय कोठा बुक भएका छन् । प्रतिनिधिहरू सबै पुगिसक्नुभएको छ । चारैवटा नाकाबाट हामी नारायणघाटमा जम्मा हुन्छौं । ११ गते नोमिनेसन हुन्छ । विधान महाधिवेशन सफल रुपमा सम्पन्न ग¥यौं । अब पार्टीलाई सही तवरले अघि बढाउनको लागि नेतृत्व चयन गर्दैछौं । मलाई लाग्छ, नेतृत्व सर्वसम्मत् हुन्छ ।’
उनले यसपालिको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने पनि बताए । उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्नकोलागि पार्टी एक ढिक्का भएरअघि बढ्नेछ, हामीले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यसपालिको महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्यको दाबेदार हो । २२५ जना सदस्यको केन्द्रीय कमिटी हुन्छ । त्यसमध्ये म पनि दाबेदार हो ।’
उनले २०३६ साालको आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति भएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘म बहुदल र निर्दलको चुनावको बेलामा पनि सक्रिय थिएँ, २०४९ सालमा काठमाडौंको १६ नम्बर वडामा अध्यक्ष भएँ । मैले धेरै वर्ष जनप्रतिधिधि भएर जनताको सेवा गरें । म २०५४ सालदेखि पार्टीको जिल्ला कमिटीमा छु । ०७७ मा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएँ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद हुँ । २०७६÷०७७ सालमा सहरी विकास राज्यमन्त्री भएर काम गरेको छु ।’ निष्ठावान कार्यकर्ताहरूलाई आफूलाई मत दिएर जिताउन पनि उनले आह्वान गरेका छन् ।
उनले नेपालमा धेरै दलको आवश्यकत्ता नै नरहेको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘नेपालमा दुई दल भए पुग्छ नेपालमा । यो देशमा एमालेले मात्रै समृद्धि र सुखी नेपालीको नारा साकार गर्नसक्छ, हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली व्यक्ति होइन, विचार हो । ओलीलाई जनताले प्रत्यक्ष रुपमा चिनेका छन् ।’
उनले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष ओली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा लागेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘७२ वर्षको कालखण्डमा, धेरै सरकार बने, धेरैजना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर हाम्रो अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँको पालामा के–के काम भयो ? तपाईँहरूले हेर्नुहोला । उहाँले साढे ३ वर्षको अवधिमा यो मुलुकको कायापलट गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । ओलीको कार्यकालमा विकास निर्मँणसँग धेरै काम भएका छन् ।’
उनले भने, ‘मुलुकलाई दिशा दिनसक्ने र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने नेतृत्व आउनेमा हामी व्यग्र प्रतिक्षामा छौं । यो अधिवेशनले सवल नेतृत्व दिन सकोस् ।’ उनले आफूले यसपटक केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने पनि सुनाए ।
उनले भने,‘अहिले सबै पार्टीको अधिवेशन हुँदैछ । सबै दलको चाहना भनेको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु नै हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी रहन्छन् । दलहरूले जनतालाई आफ्नो नीतिअनुसार आकर्षित गर्ने कुरा स्वभाविक नै हो । एमाले, माओवादी र राप्रपाले अहिले महाधिवेशन गर्दैछन् ।’
उनले आफूहरू महाधिवेशनको लागि सम्पूर्ण रुपले अघि बढिरहेको सुनाए । उने भने,‘केन्द्रीय अधिवेशन मंसिर २४ गते गर्दैछौं । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढेका छौं । राजनीतिक प्रणाली जसरी अघि बढ्छ, त्यहीअनुसार पार्टी अघि बढ्नुपर्छ । संघीयताअनुसार हामी १४औं महाधिवेशन गर्दैनौं ।
‘अहिले वडादेखि केन्द्रसम्मको अवस्था हेर्दा, ४ हजारभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ । अधिकांश युवाहरू आउनुभएको छ । क्लष्टर छुट्याएका छौं । सबैको प्रतिनिधित्व होस भनेर विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
उनले भने,‘बीपी कोइराला २५ देखि ३० वर्षसम्म पार्टी सभापति हुनुभयो । एउटा व्यक्तिले लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुहुन्न भन्नुहँदैन् । म दुई दशकदेखि केन्द्रीय सदस्य छु । अध्यक्ष भएको पनि दाहाल २१ वर्ष भयो । पार्टी र देशको नेतृत्व गर्न दाहाल नै उपयुक्त हुनुहुन्छ। प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेता माओवादीमा अहिले कोहीपनि हुनुहुन्न, भोलिका दिनमा आउनुभयो भने छलफल हुन्छ । तर प्रचण्डले सापेक्षिक रुपमा सही नेतृत्व गर्नुभएको छ । प्रचण्डको विकल्प पार्टीमा छैन ।’
उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा अघि बढिसकेको सुनाए । उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं । यही मंसिर ४ गते एकै दिन वडा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । अब मंसिर ११ गते पालिकाको सम्मेलन हुँदैछ । संगठन, सम्पर्क मञ्चको पनि एकदैदिन सम्मेलन हुन्छ ।’
उनले आगामी पुस ११, १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरिनेगरि अघि बढेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले । माओ दिवस दिनको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दैछौं । समयको हिसाबले अझै एक महिना छ । पार्टीले तल्लो तहदेखि प्रचार गरिरहेको छ ।’ आफ्नो पार्टीको अधिवेशनको बारेमा त्यति चर्चा नहुनुको कारण सर्वसम्मत् रुपमा वडादेखि नै नेतृत्व चयन गरिनुनै भएको सुनाए ।
उनले यही मंसिर २५ गते प्रदेश सम्मेलन हुने र त्योपनि विधानअनुसार नेतृत्व आउने सुनाए। उनले एमालेको महाधिवेशनको कुरा गर्दा विचारको कुरा त्यहाँ नभएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीले एमालेको दस्तावेज हेरेका छैनौं । अहिलेसम्म राजनीतिक दस्तावेज बाहिर आएको छैन् । आगामी कार्यक्रम के हो ? एक वर्षको के हो ? दश वर्षको के हो ? कार्यनीति र रणनीति के हो ? यो हामीले एमालेको दस्तावेज हेरेका छैनौं । यता कांग्रेसमा विचारको मतभेद छैन् । एमालेमा वैचारिक मतभेद देखिन्छ । घनश्याम भुसालले फरक मत ल्याएको देखेका छौं । पत्रपत्रिकामा देखेका छौं । तर, बाहिर आएको छैन् ।’
उनले एमालेको १०औं महाधिवेशनपछि पनि केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष हुने सुनाए । उनले भने,‘अहिले ओलीले नै चुनाव जित्नुहुन्छ । माधव नेपालहरू त्यहाँ भएको भए रामाईलो हुन्थ्यो । विचार लागु गर्ने नेतृत्व हुनुपर्दथ्यो । अहिले त्यहाँ वैचारिक बहस हुने सम्भावना देखिँदैन ।’